စောက်ပတ်ကို ကိုယ့်လင်က ကြင်္ည့လိုက်လျှင် လီးတောင်လာအောင်နှင့် စုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာအောင် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရဲရဲတွတ်တွတ်လေးဖြစ်နေအောင်အမြဲထားပါ။
Posted by ဒေါက်တာကုလားမ(အက်စ်) at 10:53
good egg. 8 June 2012 at 09:50
ကောင်မလေးများသိသင့် တယ် နော်
minmaungoo9June 2012 at 21:36
minmaungoo9June 2012 at 21:39
p.freya 25 June 2012 at 07:37
ဂေါ်လီ 1 November 2012 at 20:13
ဂေါ်လီ 1 November 2012 at 20:15
tin tun 27 March 2013 at 14:43
ah 15 May 2013 at 05:05
တစ်ယောက်တော့ မှတ်မှတ်ရရကြုံခဲ့ဘူးတယ်။ မယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ၃၅-၂၃-၃၆၊ အရပ်က ၅' ၅"၊ ပိပိက အတော်ကြီးတယ်၊ အမွှေးတွေကလဲ မဲပြီးသန်မာလိုက်တာမှ။ ပိပိက ဖောင်းလွန်းတော့ အစိနဲ့ ပိပိအပေါက်က အထဲမှာ ညှပ်ပြီးပျောက်နေတာဗျို့။ အဲဒီတော့ထည့်မယ်လုပ်တိုင်း အလျင်စလိုထည့်လို့မရဘူးလေ။ လမ်းကြောင်းအရင်ရှင်း ထိပ်ခေါင်းကိုတေ့၊ ဖြည်းဖြည်ချင်း သွားရတာ။ အလျင်စလိုလုပ်ရင် နှခမ်းပန်းနာတွေ လိပ်ပါသွားတော့ သူလေးလည်းနာ၊ ကိုယ်လဲပွန်းနဲ့ မကောင်းဘူးဗျာ။
နောက်ပြီး ပိပိက မုန့်ပေါင်းလိုခုံးတက်နေတော့ ဒုတ်တစ်ချောင်းလုံး အကုန်အစင်ဝင်အောင် ပုံစံလည်း ရွေးရသေးတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ဆိုင်ကယ်စီးရတာပေါ့။ ခြေနှစ်ချောင်း မိုးပေါ်ထောင် ပုခုန်းထမ်းလို့ ဝင်စို့ထွက်စို့လုပ်ရတာလေ။ ကျန်တဲ့ အခြေအနေတွေကတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ရူးပေါက်လို့ စဉ်းစာမိတယ်၊ လောကကြီးမှာ ပိပိတွေက ဒေါင်လိုက်ပဲတွေ့ဖူးတာလေ။ အဲတော့ ပိပိကန့်လန့်ပါတဲ့ စော်တွေများ ရှိနေမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ။ တစ်ကယ်များ တွေ့ခဲ့ရင်တော့ ဂွကျပြီ........... Tongue
သေချာတာပေါ့ဗျာ....စောက်ဖုတ်ကြီးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပိုပြီးစိတ်လာတာပေါ့...ကျွန်တော်တော့ ဆော်ရုပ်လှလှ မလှလှ...အဖုတ်လှပြီးဖေါင်းကားနေဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်.
Thet Htwe 19 June 2013 at 06:31
လိုးလိုက် ရရင်အရမ်းကောင်း မှာဘဲ
ခံချင်ရင်starwar3177@gmail.comကိုဆက်သွယ်ပါ 25 November 2013 at 00:54
kyaw moe wai 1 April 2014 at 07:10
sexservice4girls@gmail.com ကိုလိုချင် ဆက်သွယ်ပါ
bay lar3April 2014 at 05:49
zaw hain 22 May 2014 at 01:55
Zenithsky Soegyi 8 August 2015 at 11:34
Good Luck3October 2015 at 07:42
chan thar 27 January 2016 at 07:32
Thu Rein 20 July 2016 at 12:18
သူရိန် ပါ . . အမျိုးသား အချိန်ပိုင်း အဖော် အဖြစ် ကာမ အရသာကို ခံစားလိုသူ မမ များ၊ အန်တီ များ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် . .09453299467 သို့ မက်ဆေ့ပို့ပြီး ဈေးနှုန်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် . . စိတ်တိုင်းကျ ပြုစုပေးပါတယ် . . လုံခြုံမှု အတွက်လည်း စိတ်ချပါ . .
Thu Rein 20 July 2016 at 12:19
Thu Rein 20 July 2016 at 12:20
ဒါဆိုရင်တစ်ယောက်ထဲကိုယ်ဖာသာ လက်နဲ့ ပွတ်တိုက်စိတ်ဖြေမလား
အကောင်းဆုံးကသူငယ်ချင်းမိန်းခလေးအဖေါ်နဲ့စိတ်တူကိုယ်တူ စုပ်ပေးတာတို့ လက်နဲ့ပွတ်ပေးတာတို့လုပ်ပါ
ခံစားချက်တွေ အရသာရှိရှိ ထဲ့ထားခဲ့နော်
အခုခေတ်မှာလင်ယောကျာ`်းတွေက တန်ဘိုးရှိရှိထားပြီးသိတ်မပေါင်းကြတော့ဘူး။ခေတ်ကြောင့်ဆိုတာထက် ကိုယ်နဲ့ဘဲအဓိကသက်ဆိုင်တာပါ။တို့တွေက သူတို့တံ တွေး ထဲမမြောရအောင် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်ရမယ်
မမတို့မှာမပုပ်မသိုးတဲ့ အဖုတ် စအို ပါးစပ် ဒီသုံးခုနဲ့ဘဝကို
သူတို့ကမမတို့ရဲ့ အစုပ်တွေ အငြစ်တွေ အဆောင့်တွေမှာ
မိန်းခလေးများအတွက် အထူးသင်တန်း များ
ကိုယ့်လင်က လီးနှင့်ထိုးလျှင် အံကြိတ်ကာမနေဘဲ အသံထွ...
ဗမာအမျိုးသ္မီးများခေတ်မှီသော်လဲ အလိုးခံနည်းကိုမသိသဖြင့်ယောကျာင်္းများ က စွန့် ပစ်ချင်း မခံရအောင်စီစဉ်ထားသည်
လီးတံကို အဖုတ်အထဲမထည့် ခင် မာတင်းလာအောင် အရသာခံကာ စုပ်ပေးခြင်း လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုပါ
လီးကိုမာတင်းမလာခင် လက်ဖြင့်ညင်ညင်သာသာပွတ်သပ်ပေးပြီးလီးအနည်းငယ်မာလာပြီဆိုပါက လျှာဖြင့်လီးအတ်ပါတ်လည်ကိုနူးညံ့စွာထိုးပွတ်ပါ.နောက်ပါးစပ်ဖြင့်ငုံလိုက်စုပ်လိုက်လုပ်ပေးပါ ပြီးမှ အပေါ်မှခွပြီးတတ်ဆောင့်ပေးပါက သင့်ကို လီးပိုင်ရှင်သည်စွဲလမ်းသွားမည်
အတွင်ခံတွေ ဘောလီတွေကို အမြဲ သန်ရှင်းမွှေးစေပါ
ရျင်းသန့်တိတ်ညိမ်သောအခန်း တွင် ဇိမ် အပြည့်ယူကာစိတ်ဇြေပါ
ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းဘဲ အလိုးခံကြပါ ညီမတို့
အခု မလေးရှားမှာ ကော အခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ အခြားနိင်ငံသားတွေကို
အလိုးခံကြတာ မမ ကြားနေရတယ် ဒါတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး
မြန်မာမတွေ ကောဟုတ်ကြရဲ့လား ဗမာ ကောင်တွေက ကောင်းကေင်း
မလိုးပေးကြ လို့လား ။ဗမာကောင်တွေကောင်းကောင်းလိုးပြီးကောင်းကောင်းစုပ်ပေး
မှုတ်ပေးတဲ့ လူတွေပါဘဲ ။ရှာမတွေ့ရင်မမစီကို ဆက်သွယ်လိုက်....
တတ်ကြ၏ .အဖုတ်မှာအရည်မရှမ်းသေးဘဲချေက်ကပ်နေသဖြင့် အဖုတ်ပွမ်း
ကာခံသည့်အချိန်တွင်အားအားအားစောင့်ပါအကိုရယ် ..ကောင်းလို့ပါကောင်း လို့ပါ ဆောင့်ဆောင့်ဟုအော်ပေးရ၏
အချို့အပျိုဝင်ကာစရီးစားထားပြီးချိန်းတွေ့ကြပြီးအိမ်တွင်အာသာပြန်ဖြေကာအစေ့ကိုပွတ်တိုက်ပေးရင်းအရေထွက်ကာနီးတွင်အစေ့သည်ကော့ကာထွက်လာပြီးအရေထွက်လာ၏ထိုအခါမျိုးတွင်အစေ့ကိုမချေရပါ။ထိုအချိန်တွင်အချို့ကလေးမများသည်လက်ဖြင့်အစေ့ကိုထွက်ခါနီးချေကြ၏ထို့ကြောင့်လက်မှမမြင်ရသောရောဂါပိုးကြောင့်အစေ့တွင်ရေကြည်ဘုများထွက်ချင်း ခဏခဏယားယံချင်း စပ်ဖျင်းဖျင်းတို့ဖြစ်ကြ၏